Surespot တမန် APK ကို Android အတွက် Download encrypted
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Surespot messenger ကို encrypted
Surespot တမန် APK ကို encrypted
မည်သူမျှသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုနိုင်သေချာစေပါ။ surespot နှငျ့သငျပေးပို့အရာအားလုံးကိုသုံးပါသာသင်ဖို့ကစလှေတျတျောပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဖတ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ကာလ။ surespot သုံးပြီးပို့အရာအားလုံး surespot လုံခြုံရေး built-in ကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလွှာ ECDH လျှို့ဝှက်ချက်အနကျအဓိပ်ပါယျ shared, သင်မူကား wont အသိပေးစာ bit အဆုံးမှအဆုံးသို့အချိုးကျတဲ့-key စာဝှက်နဲ့ encrypt (256 AES-GCM bit) 521 နှင့်အတူ created သော့ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါသည် အခြားအရာတစ်ခုခုကိုကျော်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမပို့ယုံကြည်မှု Be သငျသညျကလက်ခံမယ့်ဖုန်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုမှဖယ်ရှားပစ်မည်တစ်ဦးကိုစေလွှတ်မက်ဆေ့ခ်ျကို delete အခါ, သငျသညျ, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုများသင်တို့သည်ဤမျှသူတို့ကိုလုပ်မဟုတ်လျှင် shareable မရှိကြပေ။ အကွိမျမြားစှာအထောက်အထားတွေကိုသင်ချင်ပဲသူကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလိုခငျြတဲ့သူဖြစ်ခွင့်ပြုပါနှင့်မည်သူမဆိုနှောင့်အယှက်ရရှိသွားတဲ့လျှင်သင်ကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ Surespot လိုအပ်သို့မဟုတ်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အချက်အလက်များ, ဤနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာငါ့ပါဘူးပါဘူး!
Voice ကို Messaging ကို encrypted ။ သင်၏မျက်စိသို့မဟုတ်လက်များအလုပ်များရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ကီးဘုတ်လည်းခက်ခဲသည့်ကိစ္စ, ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံအမျိုးအစား it- စကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျအစားပြောချင်သည်သင်၏ surespot မက်ဆေ့ခ်ျ၏ကျန်အဖြစ် encryption ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်တူညီသောအခြွင်းချက်အဆုံးနှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူနေကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာအကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်သတင်းစကားကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပို့ပေးရန်လွှတ်ပေးရန်မိုက်ခရိုဖုန်းခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။ (ကသူတို့ကိုခံယူခြင်းနှင့်ကစားရန်အခမဲ့) အသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းစတင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောခံစားရန် surespot အတွင်းကနေအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်။
Surespot သင့်မိုဘိုင်းဒေတာအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် Wi-Fi ကိုဒါသငျသညျအခွားသောနိုင်ငံများရှိသူတို့အားအဆွေတို့အဘို့စွဲချက်, အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောစာပို့မရကြဘူး။
Surespot open source software ဖြစ်ပါတယ်, ဒီင့်လင်းမြင်သာဖန်တီးနှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုများအတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်နိုင်အောင်ရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့။ သငျသညျကိုအထောက်အကူပြုရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင် / သငျသညျ '' surespot 'အောက်ကစာရင်းထဲမှာ GitHub အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာတှေ့နိုငျပြန်လည်သုံးသပ်။
Web ကို: Surespot.me
Facebook က '' surespot ''
Surespot '' surespot ''
keywords: encrypted စကားပြောခန်း, စာဝှက်ထားတဲ့စာတွေကိုစာဝှက်ထားတဲ့တမန် encryption ကို, privacy ကိုပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်း, လုံခြုံတမန်လုံခြုံစကားပြောခန်း, 256 AES, ECDH, open source ဖြစ်ပြီး instant messenger, IM ။
Github.com/surespot/android - ဤဆော့ဖ်ဝဲကို FFmpeg ၏ကုဒ် (ffmpeg.org) ကို LGPLv2.1 (Gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.htm) အရလိုင်စင်နှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကိုအသုံးပြုသည်